Sunday August 18, 2019 - 09:40:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 63 qof oo shacab ah ayaa dhintay boqolaal kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii weerar ismiidaamin ah lagu beegsaday goob munaasabad aroos ka dhacaysay.
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax aad u xooggan lala beegsaday guri ay xaflad aroos ka dhacaysay kaas oo kuyaal bartamaha magaalada Kaabuul ee caasimadda u ah wadankaasi.
Dad ka badbaaday weerarkan bahalnimada leh ayaa warbaahinta u sheegay in ruux soo xirtay suun walxaha qarxa lagasoo buuxiyay uu isku dhax qarxiyay bartamaha isku imaatin shacab xilli dadku ku mashquulsanaayeen dabaal degga farxadda arooska.
Dhaqaatiirta Isbitaallada magaalada Kaabuul ayaa warbaahinta u sheegay in ay qaabileen dhaawacyada illaa 200 oo qof kuwaas oo xaaladooda caafimaad ay aad uliidato.
Muuqaallo lagasoo qaaday goobta weerarku ka dhacay ayaa muujinayay Meydadka carruur iyo haween iska dhax daadsan iyo qaar kamid ah dadkii goobta ku sugnaa oo dhaawacyo culus gaareen waxaana goobta dhax qulqulayay xinjiro dhiig ah.
Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo ah Afhayeenka Taliban ayaa weerarkan aad u dhaleeceeyay wuxuuna ku tilmaamay mid wuxuushnimo oo kuwa geystay aysan marnaba marmarsiimo uheli doonin fal dambiyeedkooda..
Bilihii lasoo dhaafay ayay weerarada nuucaan ah wadankan ka dhacayeen waxaa geysanayay kooxo loo malaynayo in ay soo abaabuleen dowladaha shisheeye ee Afghanistan ku duulay si ay usuurad xumeeyaan halganka jihaadka ee Taliban ay wadankaas ka waddo muddo 18 sanadood ah.
Kooxahan oo sirdoonada caalamiga ah ku adeeganayaan ayaa sanadadii dambe weeraro kuwaan lamid ah ka geysanayay wadamo dhowr ah si ay ufuliyaan ajandayaasha dowladaha shisheeye ayna ukala qeybiyaan sufuufta jihaadiyiinta.